दलान नेपाल : पेल्न खोजे हामी विद्रोह गर्छौ - उपेन्द्र यादव
अब मधेशी पार्टीहरुको एकिकरणको कुरा गरौं, साच्चिकै काहा पुग्यो एकिकरण प्रक्रिया ?
- चाडै हामी एकिकरणलाई मुर्त रुप दिन लागेका छौं ।
तर बाहिर त एकिकरण हुदैन भन्ने कुरा ठुलो स्वरमा आईरहेको छ नि ?
- बाहिरको सबैं अडकलवाजीलाई हामी असत्य सावित गरिदिन्छौं र अब चाडै एकिकरण हुन्छ ।
खासमा एकिकरण यती लम्किनुको कारण के हो त ?
- मुल कुरा निती हो र तमलोपा, सदभावना र हामी विच नितीगत रुपमा एकिकरण गर्ने कुराको संद्धान्तिक सहमती भईसकेको छ । त्यसैले यसको वारेमा आशंका गर्नु वहियात हो ।
तर तपाईहरुको विचमा नेतृत्वको कुरै मिलेन, भन्छन नि ?
- अब चाडैं बस्ने बैठकले एकिकृत पार्टीको नेतृत्व, पार्टी नाम र संरचनाको टुगों लगाउछ । र चाडै त्यसको घोषणा हुने छ ।
हालै फोरम नेपाल भित्र फेरी एक चोटी विवाद देखियो, खासमा किन यो विवाद भयो ?
- पार्टी भित्र त्यस्तो खासै विवाद छैन । पार्टीको आफनो अनुुशासन र नियम हुन्छ । र पार्टी भित्र हुनेले त्यसको पालना गर्नुपर्छ । केही साथीहरुले वाहिर दिएको अभिव्यक्तिका कारण सर्वसम्मत रुपमा उहाहरुले अहिले केन्द्रिय कार्यसमितीवाट हटाएर सोधपुछ गर्ने कुरा छ । त्यस पछि फेरी उहाहरुलाई बोलाईहाल्छौं नि ।
खासगरी तपाईमाथी फोरम कै कयौंन नेताहरुले समानुपातिक सभासद छनौटको क्रममा आर्थिक लेनदेनको कुरा गरेर तपाई माथी आरोप लगाएका छन नि ?
- हेर्नुस पार्टीको आर्थिक विभाग छ, लेखा समिती छ, पार्टीको हरेक आर्थिक काम त्याहा वाटै हुन्छ । तर पनि यदी कसैको मनमा केही कुरा भए पार्टीको केन्द्रिय कार्यसमितीको बैठकमा लिखित रुपमा आउनु पर्यो नकि मिडियामा । यो अनौतिक काम हो ।
फोरम यसरी पटक पटक विवादको सिकार भएर फुटनुको कारण के होला जस्तो तपाईलाई लाग्छ ?
- वाहिरिया शक्ति र भित्रिया दुवै शक्ति फोरम विरुद्धमा लागी परेको छ । फोरम एउटा परिवर्तनकारी शक्तिको रुपमा उदाउदा धेरैलाई मन परेको छैन । त्यसैले यसको विरुद्धमा धेरै ठुलो शक्तिहरु लागी परेको छ ।